in ka badan 5,000 oo xoolo Lo’ ah ayaa maanta loo dhoofiyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta – STAR FM SOMALIA
in ka badan 5,000 oo xoolo Lo’ ah ayaa maanta loo dhoofiyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo Markab weyn oo kuwa xoolaha qaada ah uu goor dhow ka qaaday xoolahan dekeda weyn ee magaalada Muqdisho.
Shirkadda East Africa Livestock Company oo dhowr jeer oo hore xoolo badan u dhoofisay dalalka Carabta ayaa maanta xoolaha gaaraya shanta kun ee lo’ u dhoofisay dalka Imaaraadka Carabta.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha dowladda Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa soo dhoweeyay dhoofinta xoolaha, isagoo ku booriyay Ganacsatada inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa suuq geynta xoolaha Soomaalida ee Dibadda loo dhoofiyo.
“Waxaa aad u soo dhoweynayaa tallaabadan maanta horay loogu qaaday Ganacsigii Xoolaha oo Soomaaliya caan ku ahaa, waxaa ku dhiiri gelinayaa Ganacsatada inay sii xoojiyaan dhoofinta xoolaha ee dibada loogu iib geeyo”ayuu yiri Wasiirka Xanaanada Xoolaha Siciid Xuseen Ciid
Sidoo kale Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Mr Nuur Faarax oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu soo xoogeynsanayo dhoofinta xoolaha, waxaana uu tilmaamay in Dekeda Muqdisho laga dhoofin doono xoolo dheeraad ah
Guddoomiyaha Shirkadda East Africa Livestock Company Iimaan Maxamed Cali ayaa shegay in xoolahan ay soo mareen Maxjarka weyn ee Jaziira, halkaasoo caafimaadkooda lagu soo baaray, waxaana uu intaa ku daray in xoolaha dalka laga dhoofiyo ay yihiin kuwo caafimaadkooda uu wanaagsan yahay.
Si kastaba ha ahaatee waa markii labaad oo sanadkan gudihiisa kumanaan xoolo loo dhoofiyo mid ka mid ah dalalka Carbeed.
Maxmaed Cabdi Xayir Maareeye iyo wafdiga uu hogaaminayo oo howlo shaqo ku jooga dalka Kuwait